Mamaly Soa An’izay Manam-pinoana Andriamanitra (Hebreo 11:6)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Myama Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Zava-dehibe amin’i Jehovah ve izay ataon’ny mpanompony mba hampifaliana azy? Mety hisy hilaza hoe tsia, satria mihevitra izy fa tsy miraharaha antsika Andriamanitra. Diso hevitra anefa izy ireo satria milaza ny Baiboly hoe mankasitraka ny ezaka ataon’ny mpanompony i Jehovah. Diniho ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Hebreo 11:6.
Inona no tokony hatao mba hampifaliana an’i Jehovah? Hoy i Paoly: “Raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin’Andriamanitra.” Tsy nilaza izy hoe sarotra ny mampifaly an’Andriamanitra raha tsy manam-pinoana, fa hoe tsy misy azo atao. Tena ilaina àry ny finoana mba hampifaliana an’i Jehovah.
Finoana manao ahoana no mampifaly an’i Jehovah? Zavatra roa no tafiditra amin’ny hoe finoana an’Andriamanitra. Voalohany, “tsy maintsy mino [isika] fa misy izy.” Ahoana moa no hampifalintsika an’Andriamanitra raha tsy mino isika hoe misy izy? Tsy ampy anefa izany, satria na ny demonia aza mino fa misy i Jehovah. (Jakoba 2:19) Tokony hasehontsika amin’ny atao ny finoantsika hoe misy Andriamanitra, izany hoe tokony hanana fomba fiaina mampifaly azy isika.—Jakoba 2:20, 26.
Faharoa, “tsy maintsy mino” isika fa “mpamaly soa” Andriamanitra. Ny olona tena manam-pinoana dia matoky fa tsy ho very maina ny ezaka ataony hampifaliana an’Andriamanitra. (1 Korintianina 15:58) Ahoana moa no hampifalintsika an’i Jehovah, raha tsy matoky isika hoe mahavita na maniry hamaly soa antsika izy? (Jakoba 1:17; 1 Petera 5:7) Tsy mahafantatra azy ny olona mieritreritra hoe tsy miraharaha ny hafa izy, tsy mahay mankasitraka, ary tsy malala-tanana.
Iza no omen’i Jehovah valisoa? Hoy i Paoly: “Izay mitady mafy azy.” Milaza ny boky iray ho an’ny mpandika Baiboly fa ilay matoanteny grika nadika hoe “mitady mafy”, dia tsy midika hoe “mandeha mikaroka” fa hoe “manompo” an’Andriamanitra. Manazava ny boky iray hafa fa manondro ezaka mafy io matoanteny grika io. Mamaly soa an’ireo mazoto manompo azy amin’ny fo manontolo àry i Jehovah.—Matio 22:37.
Ahoana moa no hampifalintsika an’i Jehovah, raha tsy matoky isika hoe mahavita na maniry hamaly soa antsika izy?
Inona no valisoa omen’i Jehovah ny mpanompony? Mampanantena hoavy sambatra izy, izany hoe fiainana mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany. Hita avy amin’izany fa tena malala-tanana sy be fitiavana izy. (Apokalypsy 21:3, 4) Efa mahazo fitahiana be ireo mitady mafy azy, dieny izao. Manana fomba fiaina mahafa-po izy ireo, noho ny fanampian’ny fanahy masina sy ny Baiboly.—Salamo 144:15; Matio 5:3.
Andriamanitra mahay mankasitraka tokoa i Jehovah, ka sarobidy aminy ny fanompoana ataon’ny mpanompony. Lasa te hifandray aminy ve ianao rehefa mahalala an’izany? Raha izany, nahoana raha fantarinao bebe kokoa izay tokony hataonao mba hananana an’ilay finoana ahazoana valisoa avy amin’i Jehovah?
Famakiana Baiboly Amin’ny Novambra
Titosy 1-3; Filemona 1-25; Hebreo 1-13–Jakoba 1-5
Hizara Hizara Ilay “Mpamaly Soa An’izay Mitady Mafy Azy”